Donald Trump oo sheegay inaanu xiriir wanaagsan la yeelan doonin David Cameron.. - iftineducation.com
iftineducation.com – Donald Trump, ayaa waxaa uu sheegay inay u muuqato in aanu xiriir wanaagsan la yeelan doonin Ra’iisal Wasaaraha Britain, David Cameron, haddiiba loo doorto Madaxweynaha Mareykanka.
Ra’iisal Wasaaraha Britain, ayaa bishii December Donald Trump ku eedeeyay inuu yahay nin wax kala qaybiya oo doqon ah, xilli uu ninkaasi soo bandhigay barnaamijkiisii ahaa in Muslimiinta laga mamnuuco Mareykanka.
Donald Trump, ayaa wuxuu yiri “Waxay u egtahay inaanan xiriir wanaagsan la yeelan doonin David Cameron. Waxay u muuqataa inaanan iminka lahayn xiriir wanaagsan, waxaanse rajeynayaa inaan xiriir wanaagsan yeelano, hase ahaatee waxa ay u muuqataa inuusan isagu doonayn in dhibaatada uu wax ka qabto.”
Wuxuu beeniyay inuu yahay nin dadka kala qaybiya, wuxuuna isku sifeeyay shakhsi dadka mideeya, si aan lamid ahayn buu yiri Madaxweynaha hadda talada haya, oo uu kala jeedo Barack Obama.
“Marka 1-aad qof wax kala qaybiya maahi. Midda 2-aad maahi qof aan waxba kala garanayn, taa aniga hadda kuu sheegi kara.” Ayuu yiri Donald Trump.
Waxaa uu intaa raaciyay “Waxaan ahay qof dadka mideeya si aan lamid ahayn Madaxweynaha hadda talada haya. Anigu waxaan ahay mid dadka mideeya.”